Uhlelo lwezokuhweba lusebenza kanjani
Ongakhetha kanambambili rsi
Uhlelo lwezokuhweba lusebenza kanjani - Lusebenza lwezokuhweba
Ukuze ulayishe uhlelo lwakho lokusebenza ku- Play Console, inani elingaba khona elikhulu kakhulu le- versionCode ngu. Uhlelo lwezezimali, lusebenza njengomhlahlandlela wokufezekisa amaphupho bakho owahlelele uma usuya empeshenini.
Uma i- versionCode ye- APK yakho idlula leli nani, i- Play Console izokuvimbela kusukela ekuthumeleni i- APK entsha. Ubani, Yini, Kanjani, futhi Kungani Ubani umlutha?
Uhlelo lokubhekela umnotho wemvelo lugxile ezindaweni lapho inzuzo enkulu ingatholakala kusetshenziswa izinsiza ezincane. Chaza ukuthi lusebenza kanjani uhlelo lokwelapha lwe- Ponseti, nokuthi luthatha isikhathi esingakanani.
• Gcizelela ukuthi ukusebenzisana kwabo nabezempilo kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni kohlelo. Iningi lethu alidingi ukuwucabangisisa lombuzo.
Bayaye bathathe yonke imininingwane bahlanganise kuphume uhlelo oluzosetshenziswa lufanelane nabantu bakulelo lizwe. Ukubhekela umnotho wemvelo kuqaliswa ezizindeni ezinohlonze nezibalulekile ekongiweni kwemvelo.
Uhlelo lwezokuhweba lusebenza kanjani. Ezinye zalezi zinhlelo zisungulwa ngochwepheshe basemazweni aphesheya.
Lusebenza kanjani usuku lokufaneleka kwiNtelantengo? ZIKHETHWA KANJANI IZINDAWO EZIBALULEKILE KWEZOMNOTHO WEMVELO?
Mayelana nokuzibhalisela Intelantengo okulethwe nge- eFiling, sicela uqaphele ukuthi usuku lokufaneleka ukuthela Intelantengo luzokumiswa ngokuhambisana nosuku lwakho lokubhalisa. Izimpilo zethu zazigxile zizungezwe kakhulu izidakamizwa. • Ungabaqinisa idolo ngokuthi noma kuzoba nzima kubo, ingane yabo angeke izwe ubuhlungu nokuthi uhlelo lokwelapha luba yimpumelelo. Kungaba kuhle ukuthi abanikazi bezinkampani nabaholi bakaHulumeni baqikekele ukuhlolisisa ukuthi uhlelo nohlelo lusebenza kanjani.
Lokhu kungaba uhlelo lweskhashana ngokwemali ozoyidinga uma ususempeshenini, ukuhlelela intela kanye nokuhlela ukuthi umnotho wakho uzowukhulisa kanjani ukuze udluliselwe kwizizukulwane ohlele ukuba zihlomule. Chaza ukuthi lusebenza kanjani uhlelo lokwelapha lwe- Ponseti, nokuthi luthatha isikhathi esingakanani.
I forex v3
Ukubuyekezwa kwesistimu yokuhweba uhlelo
I forex robot wsm opinie
Isikhathi sangempela sangempela api
I forex rate peso kuya yen